Dulqaadka Mars: sifooyinka, halabuurka iyo cilmi baarista | Saadaasha Shabakadda
Aadamuhu kama daalayo raadinta nolosha meeraha kale ee nidaamka qorraxda iyo koonka. Mars waa meeraha hore u jiray weligoodna noqon doona ujeedka raadinta meeraha lagu noolaado. Waana mid la filan karo markii waxa aan ugu yeerno meeraha casaanka ah lagu daboolay wabiyo iyo badweyn. Waxaan hada haynaa robot la yiraahdo Adkaysiga Mars kaasoo mas'uul ka ah soo saarista macluumaadka ku saabsan meeraha si dhammaystiran.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato ku adkaysiga Mars iyo astaamaheeda.
1 Baadh meeraha Mars
2 Adkaysiga Mars
3 Soo degitaanka Mars adkaysiga
4 Dhawaaqa meeraha cas
Baadh meeraha Mars
In ka badan 40 sano oo sahamin ah waxay na siisay aragti faahfaahsan oo ku saabsan isbeddelka muuqaalka Martian qiyaastii 3.500 bilyan oo sano ka hor, laakiin inbadan oo ka mid ah waxyaalaheeda qarsoon weli lama fahmi karo. Xogtan, waxaan ka arki karnaa xiisaha dadku u qabaan meeraha cas. Saddex hawlgal oo ay soo direen saddex waddan ayaa ku soo beegmay meeraha casaanka ah bishaan: Shiinaha, Isutagga Imaaraadka Carabta iyo Mareykanka. Wakaaladaada hawada sare waxay qaabeeysay nooc cusub oo diyaarado indha indheeyaal ah oo loo yaqaan Mars perserverance. Wuxuu mas'uul ka noqon doonaa raadinta calaamadaha nolosha hore ee dhulka Martian.
Rover-ka waxaa la bilaabay bishii Luulyo 2020 wuxuuna ujeedkiisu yahay inuu ku dul duulo dhulka korkiisa ugu yaraan hal sano oo Mars ah, oo qiyaas ahaan u dhiganta 687 maalmood oo Dhulka ah. Waxay leedahay nidaam kombuyuutar leh awoodo shaqo oo xog dheeri ah.
Qalabka oo dhan, laba qalab ayaa si gaar ah door muhiim ah uga ciyaari doona geeddi-socodka raadinta calaamadaha nolosha waagii hore: waxa loogu yeero SHERLOC ayaa mas'uul ka noqon doona baaritaanka macdanta iyo walxaha dabiiciga ah. Hawsha 'PIXL' ayaa ah inay qarxiso walxaha kiimikada ee dhagxaanta iyo dhalooyinka. Labadan qalab waxay falanqeyn ku sameyn doonaan shaqooyinkan si heer sare ah oo faahfaahsan marka loo eego Mars Rover kasta ilaa maanta.
Gaariga ayaa baari doona dusha meeraha gaduudan si uu uga raadiyo baarka dhagaxa godka saamaynta leh dhexroorkiisu yahay 45 kiilomitir. Godku wuxuu ku yaal Jezero, woqooyiga woqooyi ee Mars, waxaa la sameeyay qiyaastii 4 bilyan oo sano ka hor waxaana la rumeysan yahay inuu ku jiro haro. Qiyaasta iyo ururinta shay-baarka waxay gacan ka geysan doontaa sahaminta waxyaalaha qarsoon ee qaab dhismeedkeeda juqraafiyeed iyo in la hubiyo haddii lakabkeeda daadka ah ay ku jiri karaan noolaha fosil. Ku adkaysiga Mars wuxuu la shaqeeyaa helikobtar yar oo la yiraahdo Ingenuity, taas oo waxay kaa caawin doontaa xaqiijinta haddii gawaaridan ay ku duuli karaan jawiga wanaagsan ee Martian.
Mid ka mid ah heesaha uu robotkani ku daro waa kaamerooyin aad u tiro badan oo ka heli kara tayada muuqaalka dusha Mars. Waxaa jira kamarado badan oo ka badan kuwii loo adeegsaday hawlgallada kale ee dhex dhexaadinta ah. Gaar ahaan, waxaan ka helnay 19 kamaradood oo ku dhex yaal gaariga laftiisa iyo 4 kale oo ku jira qaybaha astaamaha iyo soo dejinta. Sidan oo kale, waxay maamushaa in lagu qaado goleyaal kala duwan oo ku saabsan soo degitaanka waana sawiro laga shaqeyn karo si kor loogu qaado tayadooda.
Kaamirooyinka loo yaqaan 'Mastcam-Z' waxay awood u leeyihiin inay ku dhaweyso qaab dhismeedka dhagaxa illaa iyo garoon kubbadda cagta. Dhinaca kale, waxay sidoo kale leedahay kamaradaha SuperCam taas waxay isticmaali karaan leysar saameyn ku yeelata haraaga dhagxaanta iyo regoliths. Kuwani waa lakabyo dhagaxyo beerood iyo jajabyo macdan ah oo laga helay dusha meeraha cas. Ujeedada ugu weyn ee qolalkani waa in la barto halabuurka ka dhashay uumiga. Radar la dhisay ayaa adeegsada mowjado si ay u awoodaan inay sahamiyaan astaamaha dhulka.
Soo degitaanka Mars adkaysiga
Soo degitaanka adkeysiga Mars wuxuu yeelan karaa khaladaad dhowr ah. Waana in soo bixitaan ka badan 6 bilood ay soo dhamaan doonto, in kastoo 7-da daqiiqo ee ugu dambeysa ay yihiin kuwa muhiimka ah Qolal u dhigma qaybta ugu dambeysa ee safarka waxayna u dhigantaa degitaankeeda. Robot-ka ayaa soo saaray digniin raadiya markii ay soo gashay jawiga dhuuban ee Mars. Dhibaatadu waa masaafada u jirta meeraha ilaa dhulka. Waana marka calaamaddu gaarto shaybaarka ku yaal Los Angeles, masiirka aaladaha ayaa horeyba loo tuuray.
Rover-ka ayaa qaatay wakhti ka yar in uu ka soo dego jawiga Mars illaa dusha meeraha. Waa intee in le'eg ayay qaadanaysaa in calaamaddu si ay dhulka u gaarto waxaana lagu qiyaasaa inay ku dhowdahay 11 daqiiqo. Waqtigani wuxuu ku saabsan yahay 7 daqiiqo iyo Waxay injineeradu u yaqaanaan "7 daqiiqo ee argagax". Waa waxa farqiga u dhexeeya guusha ama guuldarada howlgalka sahaminta meeraha Mars.
Rover kaliya ma soo aruurin sawirada cajiibka ah iyo shaybaarada dhagaxa carriga Martian. Intaas waxaa sii dheer, waxay ku dari doontaa rikoor aan waligood la duubin: codka laga duubay dusha Mars.
Dhawaaqa meeraha cas
Adkaysiga Mars wuxuu isku daraa labo makarafoon oo keenaya cajalado maqal ah oo u gaar ah, oo ay ku jiraan daqiiqado soo degitaan iyo shaqo baaris robot sahamisa.
Si kastaba ha noqotee, maxaa yeelay cufnaanta dusha sare ee jawiga Martian ayaa kaliya 1% ka sarreysa tan jawiga Dunida, halabuurkuna wuu ka duwan yahay jawigeenna, wuxuu saameeyaa soo bixida iyo faafinta codka, sidaa darteed wuxuu u eg yahay cod ka duwan kan cas meeraha. Mid ka mid ah taariikhaha taariikhda sahaminta koonka waa ogaanshaha dhawaqa meerahan. Waxay ahayd wax daah furid markii adkeysiga Mars uu awooday inuu muujiyo dhawaqa meerahan.
Nidaamka soo-dejinta oo dhan waa otomatig, maaddaama xiriirka lala yeelanayo Earth uu qaadanayo in ka badan 11 daqiiqo, robotku wuxuu ku qasbanaaday inuu iskiis isu ilaaliyo inta lagu jiro hawlgalka.
Markabka uu robotku saaran yahay wuxuu leeyahay dabo duuban oo xagga hoose waxaa ku shaabadaysan gaashaan kuleylka. Heerkulka dusha sare ee gaashaanku wuxuu gaari karaa qiyaastii 1300 digrii. Tani waxay awood u siineysaa inay u adkeysato heerkulka sare ee dusha sare iyo jawiga meeraha cas.
Sidaad u aragto, horumarka sayniska ma bixinayo macluumaad weyn oo ku saabsan meerayaasha nidaamka qorraxda. Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto dulqaadka Mars iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Adkaysiga Mars